Category Asoosama gabaaba
Archive by category "Asoosama gabaaba"
by Tygohn Oct 2, 2012 Comment
Post a Comment. October 22, Beekan Gulummaa Irranaa-Oromiyaarraa Onkololeessa 22, Utuu sammuufi maqaa guddaa qabuu waraabessi ilaalcha bineensota biroottillee fokkuu taate kun leencoomuuf halkaniif guyyaa sagantaa siyaasa jallinaa baafachaa ooltu kun guddaa isa yaachiseera.
Foolii gootummaatu irraa gilindisa malee haxxummaafii tooftaa gurguddaa uumanii bineensota biroo isa boolla buusan inni raawwatee hinbeeku.
Leenca kun gocha dararfamuu bineensota biraatu mudhiisaa akka mudhii durba reefuu kaadhimummaarra gahaa jirtuu isa qalliseera. Ukkaamsaa yaadaan kan muddame leenci yeroo mara bineensa qabsoo jireenyaa keessa jiraatudha. Garuu kanas raawwatee hinbeeku. Bineensota akka isaa isa waliin dararaman kanneen akka Qeerransaa, Arbaa, Gafarsaafi Qamalee yaadaan maqaa dhaha.
Garuu amala bineensota kanaatu isaaf hinmijatan! Nyaatee kan hinquufneefi bineensota biroof haa hafuu kan hinbeekne albaadhessi bineensaa kan waraabessa faana waliigalu bineensi tokko jira; innis Booyyeedha.
Booyyeen kun boriif haabuluu hinbeeku. Keessumattuu mammaaksa ofif mammaakkate qaba Booyyeen. Waraansa kallattii hundaanii kana dandeessee kan waa hunda utuu hinfilatiin saamtu booyyeen waraabessa faana kaayyoo saamicha bineensotaa qixuma qabu. Kanaafis waraabessillee mammaaksuma kana fakkaatu qaba. Furmaata isaas tokkummaan barbaaduuf mala dhahanii hinbeekan. Dubbatu dhageettii hinqabu. Kunimmoo caalatti isa aarsa. Maalifan hoomaakoo gurmeessee ofiifi fakkaattotakoo bilisa baasuuf kumbiikoo mirmirsee Booyyeefi Waraabessa raawwadhee hindhabamsiisuu?
Haala kanaan hundi isaanii rakkoo isaanii furuuf yaada mataa mataa isaanii yaadu. Garuu kan yaadu malee kan hojiitti hiiku hinjiru. Waraabessi hiriyaa harree kun hamma yoomitti nugarboomfataa jiraataree? Hundi isaanii yaadaan fagoo yaadu.
Arga yaadaan lalisa birraa argu; daraaraa birraa suufu; booqaa birraa simatu. Egereef abdii gaariin akka fuula isaanii dura jiru abdatu. Gaaffii yeroon deebisuudha jedhu ofumaa wal gaafatanii ofumaa yoo walii deebisan.
Abdiin isaanii kun yoomiif eenyuun akka dhugoomu hinbeekan. Garuu, gaaf tokko…jedhu. Aangoonis akka waan Waaqarra isaaniif laatamteetti baannatu. Yeroo isaan dhufan lafti kaatee jilbeenffatti; walitti naannooftee sirbiti.
Bosonni asiif achi raafamee isaan simata. Samiin fuulasaa ibsee gadi isaan daawwata. Simbirri waccee isaan bohaarsiti. Weenniin korriftee isaaniif jeekkarti. Qeerransi harqee fiixee mukaarra bahee gadi isaan ilaala. Gafarsi gaafa isaa ol qabee adeemaa ture dhokachuuf jecha mataan gadi jedhee bosona keessa asiif achi lulluka. Kan baqatu malee kan jala dhaabbatu hinjiru.
Kan onnee qabaatee dura dhaabatu hinjiru.Goodreads helps you keep track of books you want to read. Want to Read saving…. Want to Read Currently Reading Read. Other editions. Enlarge cover. Error rating book. Refresh and try again. Open Preview See a Problem? Afan Oromo Fiction by Mootummaa kabaa. Details if other :.
Return to Book Page. Tuli Feyisa Editor. Kitaabni Abjuu jedhamtu kun seena nama tokko irratti kan hundoofte taate, jireenya gammachuu, gadda, salphina, dhiphina fi ulfina kan ibsitu taha. Seena kana keessatti jaalalli ni qorama. Walumagalatti kitaabni Abjuu kallatti jireenya hundaa calaqqisti.
Kitaabni Abjuu kutaa sad Kitaabni Abjuu jedhamtu kun seena nama tokko irratti kan hundoofte taate, jireenya gammachuu, gadda, salphina, dhiphina fi ulfina kan ibsitu taha. Kitaabni Abjuu kutaa sadii 3 qabdi. Get A Copy. Kindle Edition16 pages.Garuu Seenaan bareedduu waan taateef kiyyoo itti si goona" jette. Sabi Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay'ina ummataan tokkoffaa irra jiru.
Comments on false information posted on this page can and will be taken into account and taken seriously. Asoosama gabaabaa.
Otoo Isin Ta'e Maal Gootu
Guddina "Addis Ababaaf" Oromoon buqqa'ee baduu hin qabu! Asoosama Gabaabaa Kirkira Jaalalaa2 Kutaa 12ffaa. Asoosama Dead light 1th grade Writer blessing kemite Or bless abduramaan Elamon is full of three months, wait for the 10 year penalty to get out of prison.
Fulbaana, - pages. User Review - Flag as inappropriate. I need this book. Diraamaalee gabaaboo fi dheeroo Akkasumas fiilmi afaan Oromoo, Asoosama,Walaloo fi Sagantaalee garagaraa kanneen adda ta'an hordofuu fii daaw'achuu yoo barbaaddan.
WAA'EE jaalalaa wanti baay'een jedhameera. Dilbanni darbee, Buusaan bahe. Miilli biiftuu dhiha irraa gara bahaa deebi'ee gadi rarra'e. Asoosama gabaabaa Garaa garaa nyaate! There are also a number of wild animals that are found solely in Oromia, such as nyala, bush-buck special typered fox from. English - Oromo. The dirt boy was like a forest migration. Asoosama Afaan Oromoo Pdf Download. Seenaa Gabaabaa J. Asoosama Eenyummaa Gonfachiisu.Ani wayta san Yunivarsiitii Finfinnee, kaampaasii guddaatti barataa waggaa sadafaan ture.
Bartoota muudiin galeef jennee karra tokkaffatti suuraa keessan maxxansina. Tariis immoo jiinas buukii muudotaa irratis maqaa keessan barreesina, ammaaf garu maal si gargaaru? Kaballaa itti cufi na godhe. Sarara lamaan tokko yoon ibsuuf hamoommachuu eegalte.
“Kennaa Irreechati!” Asoosama Gabaabaa*
Maal akka ishii godhu wallaalee otoon yaaduu. Oduun ishii martuu waayee abalu abalu akkas godhee ti. Yeroo baayyee matimini dhiira, gochamni dubartii dha, gochi jaalala. Otoo sammuu oduu kana hunda ittiin funaantu beekumsa ittin funaantee waa meeqa barte. Buna nuuf dhufe suuta jennee dhuguu jalqabne. Haallii ishiin buna ittiin dhugduun mataa isaantin haala addaa qaba. Of ajjesaa orma jiraachisuu. Barattoonni adda addaa, muummee adda addaatii dhufanii achii wacu.
Ofi jette naaf yaa amanamtu, ofii jedheen ishiidha amanamaafi. Ofii jennee yoo walii amanamne wal amanna! Ibdoon yunvarsiitii Finfinneetti, barataa saayinsii siyaasati. Darbees, amma erga dormii tokko jiraachuu jalqabnee wagaa lammaffaadha. Yeroo kana keessa guyyaa tokko walti buunee hin beeknu. Ammas yaada kana kan kaase isuma. Garuu Ibdoon rakkoo tokko qaba jedhameet hamatama. Kanaaf inni sababan qaba jedha. Isaaf haccuuccaa, haxxummaa, yakka, saamicha fi kan kana fakkaatu qofatu kaabaa dhufa.
Gama biraan immoo hamma barbaachisuu ol humnatti amana. Ameerikaan addunyaa teenya irra akka feeteti kan burraaqxu waan humna qabduufi.
Ani shanaffa dha. Ergasii asi hunduu Garoo jedhaan. Karaa of-eeggachaa deeman nagahan gahan. Ibdoo yeroo baayyee adeemsa akkasii kanatu yaaddoo keessa isa galcha.
Walii galteef walii galtee dhabu. Walii hin galluuf walii galtee godhachuu. Walitti fiigu irra wal irraa fiigu. Garuu ribuu walii yaa gallu, yaa kakannu. Walii galtee kana Oromoo marti ayyana isaa irraa waan dhagahuuf gammaduu isaatuu oolaa? Barii akkuman daree jalqabaa baradhee baheen gara doormii yoon deemu, intalli tokko karaatti na argitee. Akkana taanan hangam hojachuu dandeenya?Asoosamni hujii Og barruu kalaqa ilmaan namaati. Asoosama jechuun dhara yookiin kijiba yookiin sobaa miti.
Balaqqeettii jiruu-jireenna ilmoo namaati. Gocha saba Oromoo, keessattuu sabboontota Oromoo irratti raawwatamu bifa seenaatiin barreessuun hin dhiba qofa uduu hin taane hin rakkisa.
An isa hin beeku. An ka beekuu fi barreesse garuu, sabboontota heddu bifa saniin dabran. Sabboontota lakkoofsa isaanii hin dhaqqabne, kanneen manneen hidhaa keessatti uduu gubatan, dabraniif maqaa Tolchaa Magarsaa jedhu kenne. Kana ammallee itti fufna. Waan Oromoon bara keenna diinaan taate, karaa arganne kamiinuu abbaa dhagayutti ima lallabna. Filannee Oromoo hin taane; filamneeti malee.
Hin gallu. Bilisoomuu dhabne jenneellee abdii hin kutannu. Kutaa tokkoffaati. Guyyaan Sambata galgala. Lafti waan dimimmifteertuuf ijji ija hin agartu. Hoteela Cilaaloo alaa manni guutu dha. Wonni hoteela san jiru irra caalaan diraaftitti sirba. Garii ammoo diraaftitu irraa sirba. Sirba hoteelicha keessaa dhiichisu dabalatee, iyyansi namootaa Shaashamannee guutuu waan maraache fakkaata.
Hoteela san keessatti, ka kutaalee baankonii fi siree malee ibsaan naannoo kaanii martinuu doomaa dha. Lallaafaa ajajatanii, namoota wocan keessatti lamaanumaan gad qabatanii qaaqan. Maayii irra bilbila isa tokkoo jiddumaan iyyitetu, lafaa isaan yaase. Goggogaa woyiiti.
ABJUU Asoosama Afaan Oromoo. Afan Oromo Fiction: Motuma Kaba (1)
Qahinni qaamaa ammoo dheeraa fakkeesseera. Arrii wowworaanteertu malee rifeensi mataa guutuu dha. Funyaan isaa dheeraan yoo laalan, waan dubbii suufu fakkaata.
Yaadannoo woyii kiisii fudhatee, minjaala gabaabduu isaan dura jirtu irra kaayee itti fufe. Itti fufe; odeessaan. Caalaa ka itti xiyyeeffatame garuu, namuma amma jennu kana. Fakkeennaaf; wol gahii irratti bulchaa aanaa gaafii hin taane gafachuu isaa…. Keeppii mataa qaba.
Fuulli guutuun guututti mudhachuu baatullee bifaan magaala fakkaata. Qaamni ammoo hin yabbata. Haga ka dhufe odeessu ammoo hin dubbanne. Waanuma inni dubbatu gurraan guura. Haasaya fixatanii,waan barbaadan wol irraa fudhatanii, ka barbaachisus wolii kennanii, rikkardarallee jarumatti dhiisee, bahee lixe; namni odeeffannoo sun. Umriin shantama jala gaheera. Hin hifachiisa malee.
Waan sooshaalizmii yoo qaaqu, waan ufii isaatii uume fakkaata. Jannata sooshaalizmiin qabu fidee ummata afoo kaayuu malee homaa isa hin hafan ture.Abdiiwaaq Birmajii. Gidduu kana dhukkuboota qoricha dhabeef lamaan al takkatti qabameen dararamaa jira. Yoon kana jedhuu, anis dhukkubni koo isa kana, kanatuu dawwaa dhabee na rakkisaa jiraa jechuu barbaade miti.
Galata waaqa, hanga ammaatti mana yeroo jalqabaaf kireefadhe keessa hin baane. Ilmi isaani hangafti Dhugumaadha. Dhugumaan, umurii isaa dargagumatti akka manaa baheetti hafe.
Ibidda sana keessaa gooftan maccaa akka baaqella daanfa keessaatti naaf baase naa galche. Maal godharee gammachuun sun oole hin bulle! Fuudhi, bultii dhaabbadhu jedhee osoon kadhadhuu na dide. Bara mana bahee, eessa buuteen isaa dhabame. Lamaanu baratanii, hojii fi bultii qabatanii magaaluma Adaama keessa jiraatu. Aaddee Kumeen ilmaan isaani kophaa guddisan. Yeroo ammaa mucaa durbaa Leellisee jedhamtu kan intalti isaani deesse waliin jiraatu. Leelliseen mucaa waggaa kudhan hin caaleedha.
Naannoo ani dhaladhee guddadhetti, Oromoon nama umuriidhaan isa caalu maqaa ilmaa ykn intala hangafaa Abbaa ykn Haadha jecha jedhu dura aansee ittiin waama. Haadha Dhugumaatin akka gaaritti walii galla. Akka ilmaan isaanitti malee akka alagaattillee na hin ilaalan. Keessattu yeroo ayyaanaa waggaa akka tasa yoon ani dafee manatti galuu baadhelle nyaanii fi dhugaatiin manatti naaf ergama. Cororsaan gaafa ayyaana qillee isaan naaf laatan isa ani yeroo tiksee turee na yaadachiise.
Haati Dhugumaas isuma kana na yaadachiisan! Walumaagalatti, Haati dhugumaa nama gaariidha. Kanumatu egaa waggaa lama guutu haadha Dhugumaa waliin na tursiise. Dubbichi akkana; dhukkubni koo inni duraa yaala dhabee na dararaa jiruu, yeroon itti nama qabuu fi sadarkaan dhukkubbii isaa wal haacaaluu malee dhala namaa hundumaa inuma qaba. Magaala iftuu, ija gurguddatti.
Ilkaan ishee yeroo kolfitu aanan ayeetuu reefu elman fakkaata.Yaalii Ajjeechaa Dr. Abiy Ahmad irratti yaalame. Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse. Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame. Baqqalaa Garbaa Wabiidhan Gadii Lakkifamuufi! Bishaan harkasheerra gadi dhiiftee lafaa ol kaatee faana lamaan sana otoo irra hin ejjetiin cinaasaa ejjechaa faana dhahuutti kaate.
Yommuu baala dabaaqulaa sana bira dabartee jettu ammas kan lafa qonnaa keessa miila guddaadhaan hodhoggeessee kutee fuudhe agarte. Haati Xuurii naasuu guddaadhaan liqimfamte.
Xuuriiniis yeroo haatisaa waamtu fiigichaan garashee dhaquu waan jaalatuuf fiigaa boroo manaan bahuuf yommuu jedhu,qiinaaxxii manaa kan galbii jirurraa saagaa sutaan asii ol sutame mataa Xuurii keessa waraane. Mataan kee si dhiigee? Mee gara godoo jabbootaa,sangootaa fi kan kottee duudaan itti galan sana hundaa fiigiitii ilaalimee,baniitii akka horiin hundu jiru ilaali jetteen.
Akka isheen jettetti mana sadansaa banee ilaale. Yommuu mana sadaffaa banee jedhu sangoota cimdii toorba Sangoota 14 keessaa sangaan tokko hin jiru.
Yeroo dhiyootti ittiin wal agarraa. Your email address will not be published. Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email. Diraama Dheebuu About Us Nuqunnami. Afaan Oromo English Amharic. Gulaanta Yaalii Ajjeechaa Dr. Haadha Xuurii fi Xuurii. Waliif Hiraa:.
Shuumii Abarraa 4 years ago.
Vugor October 2, 2012 at 10:12 pm